HowTo: Isa Plasma 5.2 muArchLinux / Antergos + Matipi | Kubva kuLinux
Ya tinovaratidza iyo nhau uye kugadzirisa izvo Plasma 5.2 inounza kwatiri, uye ino nguva ini ndinokuratidza maitiro ekuisa uye kugadzirisa iyi nyowani vhezheni yeKDE kubva Antergos, chete neiyo base system. Izvi zvinoshanda zvakafanana kana isu tikaisa ArchLinux kubva pakutanga, nekuti Antergos inoshandisa zvakafanana zvinyorwa.
Izvo zvinoratidzwa pazasi zvinofanirwa kuitwa panjodzi yako wega. Isu hatina mhaka yekurasikirwa kwedata rako kana njodzi dzakadai.
1 Kuisirwa Antergos
2 Kuisa Plasma 5.2
3 Matipi evashandisi ve KDE 4.14.X
Iyo yekumisikidza maitiro eAntergos iri nyore chaizvo, yakafanana chaizvo neBuntu uye zvese zvinoitwa zvakajeka. Musiyano chete ndewekuti mudanho ratinosarudza iyo Desktop Nharaunda yezvatinoda, isu tinosarudza sarudzo hwarondiko kuti, hatisi kuzoisa chero tafura.
Tichazviita nenzira iyi nekuti kana tikasarudza KDE, ichaisa KDE vhezheni 4.14.4 uye harisi iro zano.
Kuisa Plasma 5.2
Tichifunga kuti isu tatoisa Antergos uye isu tese tagadzirira, isu tichaisa anodiwa mapakeji kuti unakirwe nePlasma 5.2. Kana pane chero chikonzero vane matambudziko neNetwork Ethernet (memo kwandiri) uye ivo vanoshandisa DHCP, vanogona kuimisikidza nemirairo:
Zvino isu tinongofanirwa kumhanya:
Iye zvino taisa:
Iwe unogona kutibvunza kuti tibvise khelpcenter sezvo ichipesana. Isu tinosunungura iyo pasina dambudziko
Aya ndiwo mapakeji anodikanwa kune zvese zviri mu KDE kuratidza nenzira kwayo. Hatigone kukanganwa zvimwe:
Iyo meta-package xorg inotibvumira kusarudza izvo zvatinoda kuisa. Isu hatina kadhi rimwe chete revhidhiyo.
Tinofanirwa kumisikidza NetworkManager uye SDDM inova iyo KDE musangano maneja.
$ sudo systemctl inogonesa sddm.service $ sudo systemctl inogonesa NetworkManager
Tinogona kutangazve izvozvi 😀
Matipi evashandisi ve KDE 4.14.X
Nekusvika zvishoma nezvishoma kwemapakeji eiyo inotevera vhezheni yeKDE kune yazvino vhezheni, mafaira ekumisikidza ave kuitirwa zvakasiyana sezvandakatsanangura mune imwe posvo. Kunyangwe ye KDE4 marongero emushandisi achachengetwa ~ / .kde4 /, kune mafomu matsva avanochengetwa mukati ~ / .config / sezvo Arch Wiki.
Zvino mukati ~ / .config pane yakakosha faira inonzi mhaurovi iyo yandinotaura nekuda kweinotevera: zvakaitika kwandiri kuti maficha akaita Kate o Konsole Ivo havana kutora font iyo yandaive nayo panzvimbo yeiyo yese system, saka ndaifanira kuiisa manyore. Akazviita sei? Nyore.
Kana izvi zvikaitika kwauri, isu tinovhura iyo faira uye tinotsvaga Chikamu cheGeneral icho chinofanira kutarisa zvakanyanya kana zvishoma seizvi:
[General] ColourScheme = Breeze Zita = Breeze mumvuriSortColumn = ichokwadi
uye tinoisiya sezvizvi:
Uye zvechokwadi, ivo vanofanirwa kutsiva Tahoma uye Ubuntu Mono nemafonti avanoshandisa ehurongwa. Izvo hazvidikanwe kutangidza PC kana kubuda musangano, isu tinongovhara application nedambudziko uye ndizvozvo.
[... inogara ichigadziriswa ...]
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » HowTo: Isa Plasma 5.2 muArchLinux / Antergos + Matipi
- Inogona kuitiswa WiFi kubva kune yekumisikidzwa? Nekudaro, zvingave zvisina basa kubatanidza iyo ethernet tambo.
Parizvino ini ndinoshandisa Archbang uye ndinoda kuyedza Plasma 5, ko kugadzikana? Thanks 🙂
Sezvo mudzi waisa # wifi-menyu uye ichavhura chiitiko kusarudza netiweki uye isa iyo yekupfuura. Ipapo iwe unogona kuyedza kubatana ne # ping -c 3 http://www.google.com.ar uye iwe uchaona kana yakabatana kana kwete. Ndakaita izvi kubva kune ino yakanaka posvo -> https://blog.desdelinux.net/guia-de-instalacion-de-arch-linux-2014/
Kana Kusimudzira kuPlasma muArch Kmix haina kutanga pabhoti, ndinofanira kuitanga Nemaoko ... Ndinofanira kuiisa zvakare? Nekuti mune yeSystem tray hapana nzira yekuwedzera iyo Vhoriyamu Kudzora
Ndiri kuyedza plasma 5 muOpenSUSE Tumbleweed, uye kmix inotanga pasina dambudziko mutray, ndiko kuti kana iri kmix uye kmix5 uye unogona kunge uri kushandisa kmix.
Parizvino, haina kundipa chero hang up. Iri kudya yakawanda yegondohwe, plasmashell inotanga pa150 megabyte uye yatove kuenda pa230 mumaminitsi makumi matatu ekushandisa (zvese izvi, izvozvi zvese zvinopera mu "shell" 😀). Mifananidzo yakanyanya kuwanda uye mashandiro anovhura nekukurumidza
Chinhu "chakashata" ndechekuti ini handisi kuwana iyo oxygen theme yeiyo yekushongedza hwindo, ndakaifarira iyo iri pamusoro pemhepo.
Kubva pane zvandakaona, kana zvirongwa zvese zvave kuendeswa ku qt5, plasma 5 ichave inokodzera mutsivi weshanduro yechina.
Mhoroi, ichi "chipembenene":
"Chikonzero chekukumbira: kmix-14.12.1-1 inodiwa pachinzvimbo kmix-multimedia yekushanda chaiyo kmix pasi pePlasma 5."
Mune inotevera, tinovimba chete mazuva mashoma, kdemultimedia-kmix ichatsiviwa ne "Kmix". Unogona kuverenga zvimwe zvakataurwa muiyi link ...
Zvakanaka kana ikasabuda ndinoitanga nemaoko uye ndizvozvo 😀
Thanks @hector, ichokwadi kuti ndine kmix kwete kmix5 nekuti zvinoita kunge Oxygen pandinoitanga nemaoko… Uye @ BD550 iri zvishoma kunze kwe RAM Plasma Inotevera, rimwe zuva ini ndakasvika kuKugara 4200MB!
Pindura kuna josejacomeb
Imwe mhinduro iri nyore ndeyekuwedzera "kmix-multimedia" muSystem Preferences -> Kutanga uye kudzima. Kumhanya pakutanga.
Ndakaita izvozvo 😀
Mhoro, kune avo vane matambudziko ne sddm, pamwe inyaya yekuti haina kuiswa.
Iyo yakaiswa ne pacman -S sddm uye voila.
Mubvunzo wandinoisa zvese zvakaonekwa sezvakanaka asi kubva pane zvandinoona iri kde 4.14 ine brezee dambudziko nderekuti harishandisi shanduko mukuonekwa kunyange shandura Wallpaper uye zvese zvinoramba zvichingouya sezvazviri, ndiko kuti, ne Wallpaper nemifananidzo paunenge uchivhara chikamu chichagara zvakare sekunge yaive kekutanga kupinda mukati
Ndakaiisa nezuro muArch uye zvese zvakawedzera kana zvishoma munzvimbo yayo. Shanduko haina kunyanya kunetsa kwandiri; zvirokwazvo mamwe matambudziko andaive nawo ne KDE 4.14 akagadziriswa. Zvinosuruvarisa, kune mamwe maPlasma 5 mifananidzo (mune menyu, izvo zvinobviswa zvishandiso widget, kana kunyangwe iyo cashew) zvinotaridzika zvakakura uye maplasmoid kunze kwenzvimbo kwandiri. Ini handizive kuti ndoigadzirisa sei kana kunetsana kungave kupi ,: S.
Ndine dambudziko xD hachisi chinhu hombe asi chakashata haha, ndinofanira kutanga manyore "sddm" ne "kutanga" sarudzo sezvo iyo "inogonesa" ichiti "kutadza iyo yatovepo": Une mazano ekugadzirisa ? Uye chero "theme" yaunokurudzira? Mufaro!
Harry Marcano akadaro
Mhoro shini-kire, iwe unongofanirwa kudzima iyo yawakaisa uye inogonesa sddm, semuenzaniso unodzima gdm "$ sudo systemctl kudzima gdm.service" uye gonesa sddm "$ sudo systemctl inogonesa sddm.service" uye ndizvozvo, tangazve .
Pindura kuna harry marcano
Mhoroi, ndine mubvunzo izvozvi ndine arch ine kde 4 yakagadzika vhezheni, asi yakaitwa kuti izivikanwe kwandiri uye nekudaro kuisa plasma 5 .. heino mubvunzo wangu wekutanga wandinofanira kutanga ndabvisa uyezve kuti ndiise chii kana nzira chaiyo iri sei? chandisingade ndechekuti hapana chinhu chibviswe mumafaira angu ega ... ndatenda pamberi
Pindura kuna jedr93
Hi jedr93, Bvisa iyo yawakaisa "$ sudo pacman -Rc kdebase-workspace" uye isa plasma "$ sudo pacman -S plasma-meta" unogona kuzvitungamira kuburikidza newiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Plasma
Zvakanaka, asi yakagadzikana kare? Ndine archlinux ine kde 4.14.8 uye ndinoda kuisa kde plasma 5.2 zvakachengeteka.
Mhoro! Makadii ?
Kutenda nekugadzira aya madhairekitori! 😀
Iwe unoziva kuti ini ndaisa yakachena kumisikidza yeArch uye ndakaisa zvese zvawakaratidza asi nharaunda haina kutakura mushe, mushure mekupinda mukati uye kurodha KDE bar zvinoita kunge desktop haina kutakura mushe, ini ndinongova chete padivi menyu ye «mifananidzo - vhidhiyo - mimhanzi »uye ini hapana chandingaite. Unoziva here kuti chingave chii?